Ny efijery iPad Air dia lafo kokoa, fa ny fitaovana kosa mora vidy kokoa ho an'ny Apple | Vaovao IPhone
Ny efijery iPad Air dia lafo kokoa, saingy mora kokoa ho an'i Apple ny fitaovana
Ny fandefasana vokatra Apple rehetra dia arahin'ny lisitr'ireo tatitra lehibe momba ireo singa, mpanamboatra ary ny vidin'ny singa tsirairay mandrafitra azy. ny iPad Air amin'io lafiny io dia tena mamokatra tokoa izy, manolotra vaovao vaovao sy mahaliana be dia be. Araka ny tatitra IHS ho an'ny AllThingsD, ilay maodely iPad vaovao, ilay iPad Air vao vita batemy, dia manana efijery mahomby sy lafo kokoa noho ny maodely teo aloha, fa ny iPad amin'ny ankapobeny dia manana vidiny ambany kokoa noho ny iPad teo aloha.
Ny iPad Air dia manana vidin'ny famokarana $ 274 ka hatramin'ny $ 361 (miankina amin'ny maodely). Ny vidin'ny maodely fototra indrindra dia $ 42 latsaky ny iPad 3.
Na izany aza, araka ny nambarantsika teo aloha, ny vidin'ny singa ao amin'ny efijery dia avo kokoa, manokana $ 133, efa ho ny antsasaky ny vidin'ny maodely fototra. Ary izany ve ity efijery vaovao ity dia mahomby kokoa ary mandroso kokoa noho ilay teo aloha, miaraka amin'ny fanjifana angovo ambany. Raha mila jiro LED 84 hanazavana azy ny efijery teo aloha, mila 36 fotsiny ity maodely vaovao ity, ary tsy hoe satria mihiratra ny jiro, fa satria Apple afaka mampiasa sarimihetsika optika manify izay manampy amin'ny fanaparitahana ny jiro manerana ny efijery. Tsy mampihena ny fanjifana bateria fotsiny io fa mampihena ny lanjan'ilay fitaovana.
Fa misy Zava-misy mahaliana hafa avy amin'ny tatitra IHS:
Ny vera dia misy vera tokana, tsy toy ny maodely teo aloha izay nanana solomaso roa.
Ny chip A7 ao amin'ny iPad Air dia $ 18, 5 ambany noho ny A5
Ny puce LTE an'ny iPad Air dia afaka manohana ireo mpitatitra any Etazonia rehetra, tsy toy ny iPhones 5s sy 5c
Ny tombony azon'ny Apple miaraka amin'ny maodely WiFi 16GB dia 45%, raha ny maodely 128Gb LTE kosa dia manana maridrefy 61%.
Fanazavana fanampiny - Fa maninona no mividy iPad fa tsy tablette hafa?
Loharano - AllThingsD
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » Ny efijery iPad Air dia lafo kokoa, saingy mora kokoa ho an'i Apple ny fitaovana
Duranforce dia hoy izy:
Toa mora kokoa amiko izy io satria poakaty eo anelanelan'ny lcd sy ny vera ivelany, mampatsiahy betsaka ny iPhone 3G izy io ary feno vovoka teo anelanelan'ireo takelaka ireo, ary koa ny iPad Air-ko misy vovoka roa ao anatiny ary izaho mikasa ny hanakalo azy amin'ny iray hafa indraindray dia misy 128 unit ao amin'ny magazay
Mamaly an'i Duranforce
Dr. Fone sitrana voafafa angona avy amin'ny fitaovana. Raisinay ny fahazoan-dàlana 4.
Tian'ny lehilahy ny iPhone 5s volondavenona fotsy